ထိပ်တန်း 10 အိုင်ပက်ကာစီနိုဂိမ်း - အကောင်းဆုံး iPad ကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ထိပ်တန်း 10 အိုင်ပက်ကာစီနိုဂိမ်း - အကောင်းဆုံး iPad ကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
(873 ပျမ်းမျှအားမဲ: 4.00 )5ထဲက
Loading ... Apple ရဲ့ iPhone ကိုပထမဦးဆုံး 2007 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အိုင်ဖုန်းစမတ်ဖုန်းများတို့သည်ဤလောကသို့ Apple ရဲ့ entry ကိုဖြစ်တယ်, iPhone ရဲ့အားလုံးလေးခုကလက်ရှိသားစဉ်မြေးဆက်တဆင့် Apple ရဲ့စမတ်ဖုန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုဘိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ Google ရဲ့ Android ဖုန်းများကနေလေးလံတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစျေးကွက်အနည်းငယ်ပိုယှဉ်ပြိုင်စေတော်မူပြီသော်လည်းနှစ်ပေါင်းအဘို့, iPhone, လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးလူသိများစမတ်ဖုန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ iPhone / iPad သင့်ရဲ့ပုံမှန်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်: သင်စကားသံကိုမဆိုမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အတူတူသောခေါ်ပေမယ့် iPhone ရဲ့အင်တာနက်စွမ်းရည်သင်သည်လည်းအီးမေးလ်များ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, မက်ဆေ့ခ်ျ၏များစွာသောအခြားအမျိုးအစားများကိုပေးပို့ဖို့ဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ iPhone နှင့် iPad ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်များအတွက် built-in media player တစ်ခု web browser ကိုသင်အင်တာနက် access ပေးစေခြင်းငှါ, သင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုယူခွင့်ပြုတဲ့ကင်မရာနှင့်ဖြစ်စေ applications များသို့မဟုတ် "apps များ" ၏တစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ရှိပါတယ် သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတောင်ပိုမိုအသုံးဝင်။ အိုင်ပက် / iPhone ကိုတစ်ဦးလက်ကွက်အပါအဝင်အားလုံး input ကိုများအတွက်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
ထိပ်တန်း 10 iPad ကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
iPhone / iPad ကိုကာစီနိုဂိမ်းဘာတွေလဲ?
အဆိုပါ iPad နဲ့ iPhone ပေါ်မှာမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားအွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွက်လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်၏။ အိုင်ပက်နဲ့အိုင်ဖုန်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်အခြားဂိမ်းအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ထွက်ထားအခမဲ့နှင့်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံလောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်း apps များနှင့်ပလက်ဖောင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှုနေကြသည်။ ရိုးရာအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံသင့်မိုဘိုင်းကိရိယာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုအတွက် apps များနဲ့ iPhone-နိုင်စွမ်းချက်ချင်းကစားဂိမ်းများကိုထုတ်, မိုဘိုင်းဂိမ်းဈေးကွက်သို့ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
iOS ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံသင့်ရဲ့ iPhone ကအင်တာနက် access လုပ်နိုင်ဘယ်နေရာမှာမဆို, iPhone နဲ့ iPad အသုံးပြုသူများကိုမရရှိနိုင်သူတို့ရဲ့လက်ဖဝါးထဲမှာလောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပျော်စရာပေးပါ။ အိုင်ပက် & အိုင်ဖုန်း၏ခရီးဆောင်သဘောသဘာဝဟာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး slot နှစ်ခုကစားရန်လိုသူလောင်းကစားသမားတွေ, ဗီဒီယိုကဖဲချပ်ဝေခေါင်းစဉ်နှင့် Blackjack, ကစားတဲ့, ဘင်ဂိုကစား, သူတို့၏စမတ်ဖုန်းကနေအခြားအဂိမ်းများကိုနဲ့တူလောင်းကစားရုံဂန္များအတွက်ကြီးမားသောမဲနှိုက်သည်။ မိုဘိုင်းလောင်းကစားဝိုင်းပျော်စရာများနှင့်အလားအလာအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုဒ်များ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်စမတ်ဖုန်းဂိမ်းရွေးချယ်စရာပေး scramble ကြောင့်လည်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွက်လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်၏။
iPhone နဲ့ iPad အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းများ
ကလူပထမဦးဆုံးအိုင်ပက် & iPhone ကိုမိုဘိုင်းလောင်းကစားဝိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါသူတို့က iOS အသုံးပြုသူများကမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်သောဂိမ်းအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုစပ်စုပါတယ်။ အိုင်ပက် & iPhone ကိုအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံဂိမ်းရိုးရာအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်းခေါင်းစဉ်ရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံမှာရှိကွောငျးမဆိုဂိမ်းနောက်ဆုံးမှာ iPhone နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ယခုအဘို့, စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ပါကငွေအဘို့အအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းများ၏စာရင်းကန့်သတ်ထားသည်။ မိုဘိုင်းလောင်းကစားဝိုင်းအတော်လေးသစ်ကို, ဒါကြောင့်အသစ်သောဂိမ်းများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းနေရာများအားလုံးအချိန်ကိုတက်လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်, သင် Blackjack, ကစားတဲ့နှင့်ပင်ဘင်ဂိုကစားနှင့်အခြားအထူးပြုဂိမ်းအဖြစ် slot နှစ်ခုနှင့်ဗီဒီယိုဖဲချပ်များကဲ့သို့လောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်းအကြိုက်ဆုံးနဲ့တူဂန္ကစားနိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းသစ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအကြိုက်ဆုံး၏ iPhone ကို & အိုင်ပက်ဗားရှင်း၏ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ Microgaming ယခုသူတို့ရဲ့လူကြိုက်များတိုးတက်သော slot နှစ်ခုခေါင်းစဉ်စမတ်ဖုန်းနဲ့ iPhone အသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်, Mega Moolah စေသည်။ mega Moolah မကြာခဏဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသို့ပြေး, သင်၏ iPhone ပေါ်မှာ mega Moolah မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ iPhone ကိုသို့မဟုတ်အခြားစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ကြီးမားသောတိုးတက်သောထီပေါက်လိုက်နိုင်မကြီးတွေတိုးတက်သောထီပေါက်ပေးထားပါတယ်။
သင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားရွေးချယ်စရာမှ iPhone, iPad လောင်းကစားဝိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သင်ပိုမိုဂိမ်းအားလုံးအချိန်ကိုပေါ်ထွန်းနှင့်အတူသင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များမှာရှာတွေ့ချင်ပါတယ်တူညီသောဂိမ်းများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏။ iPhone အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေါ်ထွန်းအသစ်သောခေါင်းစဉ်နှင့်အသစ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူတစ်ဦးထွန်းသစ်စစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လင်းနို့ချွတ်ညာဘက်ရှာနေတဲ့ဂိမ်းကိုမတှေ့ဘူးဆိုရငျ, ပဲလူနာဖြစ်လိမ့်မည်။ iPhone အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းလူကြိုက်များအတွက်ပေါက်ကွဲသည်ကိုသင်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံမကြာမီ iPhone ကိုလောင်းကစားဝိုင်းရွေးချယ်စရာရှိသည်လိမ့်မယ်အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။
ရိုးရာအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း vs. က iPhone / iPad ကိုကာစီနိုဂိမ်း
အဓိကကသင်၏ laptop ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်သင့် web browser ကိုအတွက်လောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်းအကြားခြားနားချက်နှင့်သင့် iPhone, iPad ပေါ်တွင်လောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းဟာနှစ်ဦးစလုံးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ သင့်ရဲ့ iPhone, iPad ကို web access ရရှိထားတဲ့မည်သည့်နေရာအရပ်အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားစက်အပြောက်ဖြစ်လာနိုင်သည်ရှည်လျားသောလမ်းခရီးစဉ်အပေါ်, အလုပ်တစ်ချိုးကာလအတွင်းဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်အွန်လိုင်း slot နှစ်ခု play, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားသင့်ရဲ့ iPhone / iPad ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အင်တာနက်လောင်းကစားရုံမှာကစားအကြားနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုသင်ရိုးရာအင်တာနက်ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အတူပြုကြသကဲ့သို့သင်တို့ကို iPhone လောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်အဖြစ်အများအပြားရွေးချယ်စရာရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါက iPhone / iPad ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ခုထွန်းသစ်စစျေးကွက်ကြောင့်င်နှင့်ပေါ်အလုပ်လုပ်သောလောင်းကစားရုံဂိမ်းကို
iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့် web-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအကြားတူညီအများအပြားရှိပါတယ်။ ဖောက်သည်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအကြောင်းကိုကိုချစ်အရာကိုအများကြီး iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံနေဆဲဆုကြေးငွေနှင့်သင့်သစ္စာရှိမှုအတှကျအသငျသညျဆုချဖို့ဒီဇိုင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကိုဆက်ကပ်။ iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံသင့်အကောင့်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများအမှု၌ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးကူညီမှုကိုဆက်ကပ်။ iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံလူကြိုက်များအတွက်ကြီးထွားအဖြစ်ကိုလည်း, သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းအကြိုက်ဆုံး၏ပိုပိုပြီးသင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကို Safe နှင့်လုံခြုံတဲ့ iPhone / iPad ကိုရီးရဲလ်ငွေကာစီနို Pick လုပ်နည်း
iPhone / iPad ကိုလောင်းကစားရုံရွေးချရိုးရာ web-based လောင်းကစားရုံကောက်နေရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဂိမ်းမျိုးစုံ, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု options တွေကိုအပိုဆုကြေးငွေ & ပရိုမိုးရှင်းနှင့်သိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာ options အမျိုးမျိုး: သင်အင်တာနက်ကကာစီနိုလောင်းကစားရုံကနေမျှော်လင့်ထားအားလုံးသည် features တွေလောင်းကစားရုံအိုင်ဖုန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ apps များမှာရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက iPad / iPhone ကိုလောင်းကစားရုံကိုရွေးချယ်ခြင်းအခါ, သင်ကတရားဝင်လောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်း provider ကတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေလုပ်နေသေချာပါစေ။ အကြောင်း, လက်မှတ်ရှာနေအွန်လိုင်းဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုခြင်း, သင်သည်သင်၏ကစားသမားအကောင့်ရန်ပုံငွေဆုံးဖြတ်ရှေ့၌သင်တို့အိမ်စာလုပ်နေဆိုလိုသည်။
ညာဘက်ကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံအိုင်ပက် / iPhone ကိုလောင်းကစားရုံကိုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးရဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချက်: တည်ထောင်ရန်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအိုင်ပက် / iPhone ကိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပြီးသားအွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံမှာကစားသမားအကောင့်ရှိပါကဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ အတော်များများတွင်အင်တာနက်-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ဒါကြောင့်သင်အသစ်တစ်ခုကိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းပံ့ပိုးပေးရှာဖွေနေ go မတိုင်မီသင်၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံသင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်ဂိမ်းကမ်းလှမ်းလျှင်ကြည့်ဖို့စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 iPad ကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
2.1 iPhone / iPad ကိုကာစီနိုဂိမ်းဘာတွေလဲ?
2.2 iPhone နဲ့ iPad အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းများ
2.3 ရိုးရာအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း vs. က iPhone / iPad ကိုကာစီနိုဂိမ်း
2.4 iPhone အတွက်ပလက်ဖောင်းစျေးကြီးနှင့်အချိန်-စားသုံးသည်။
2.5 တစ်ဦးကို Safe နှင့်လုံခြုံတဲ့ iPhone / iPad ကိုရီးရဲလ်ငွေကာစီနို Pick လုပ်နည်း